Fikendrena ara-potoana: fiarovana fiarovana amin'ny marika amin'ny vanim-potoana tsy misy cookie | Martech Zone
Ilaina tanteraka ny fiarovana ny marika ho an'ny mpivarotra mandroso amin'ity tontolo mikorontana ara-politika sy ara-toekarena ity ary mety hiteraka fahasamihafana amin'ny fijanonana amin'ny asa aman-draharaha aza.
Ireo marika dia tsy maintsy misarika doka matetika satria miseho amin'ny toe-javatra tsy mendrika, miaraka amin'ny 99% amin'ireo mpanao dokam-barotra no miahiahy momba ny dokam-barotra mipoitra amin'ny tontolo azo antoka.
Misy antony lehibe tokony hitebahana
Ny fandinihana dia nampiseho doka izay hita eo akaikin'ny atiny ratsy aterak'izany a 2.8 heny mihena ny fikasan'ny mpanjifa hifandray amin'ireo marika ireo. Fanampin'izany, ny roa ampahatelon'ny mpanjifa, izay nanondro ny fikasana hividy marika lehibe, dia tsy dia nividy marika intsony rehefa avy naseho tamin'ny doka mitovy amin'ilay orinasa misy votoaty tsy mendrika; miampy ny fahatsapan'ny mpanjifa an'io marika io dia nidina impito.
Fikendrena ara-konteks: Layer vaovao an'ny faharanitan-tsaina azo antoka amin'ny marika
Ny vaovao tsara dia, ny fikendrena ny zava-misy dia miantoka ny fiarovana ny marika amin'ny alàlan'ny famakafakana ny atiny sy ny fanilihana ny fametrahana eo amin'ny tsanganana sy ny atiny heverina ho tsy azo antoka. Ny motera mikendry ny zava-bita mahomby dia afaka mandrindra ny karazana atiny rehetra misy amin'ny pejy iray, mba hanomezana torolàlana 360-tena marina momba ny dikantenin'ny pejy.
Ny fitaovana tsara dia ahafahana manatona fomba be pitsiny kokoa noho ny fampifanarahana teny fanalahidy tsotra, ary mamela ny mpivarotra hanolotra tontolo iainana tian'izy ireo hampidirina, ary ny tena zava-dehibe, ireo izay tian'izy ireo esorina, toy ny atiny mampiasa kabary fankahalana, fizarazarana be loatra, fanaovana politika be loatra, fanavakavaham-bolon-koditra, fanapoizinana, fanapoizinana, fanapoizinana. stereotype, sns.
Ohatra, ny vahaolana toy ny 4D dia mamela ny fanilihana mandeha ho azy an'ireo karazana fambara ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana manokana amin'ireo mpiara-miasa manokana toa an'i Factmata, ary ireo famantarana hafa momba ny toe-javatra hafa azo ampiana hanatsara ny fiarovana ny toerana isehoan'ny doka.
Milamina ve ny marika momba ny tontolon'ny doka?
Fitaovana fitadiavana tohan-kevitra azo itokisana afaka mamakafaka atiny sy manaitra anao amin'ny fanitsakitsahana ny fiarovana ny marika arakaraka ny:
Politika mahery vaika na fitongilanana politika
Fikendrena mihoatra ny lahatsoratra
Ny sasany nandroso tanjona ara-nofo ny fitaovana aza dia manana fahaiza-manao amin'ny famoahana horonantsary, izay ahafahan'izy ireo mamakafaka ny atiny tsirairay amin'ny atiny horonantsary, mamantatra ireo logo na vokatra, mamantatra sary azo antoka amin'ny marika, miaraka amin'ny sora-baventy mampahalala azy rehetra, mba hanomezana tontolo iainana optimum ho an'ny marketing ao anatiny sy ny manodidina an'io atiny video io. Anisan'izany ny zava-dehibe, ny sary rehetra ao anatin'ny horonan-tsary, fa tsy ny lohateny, thumbnail, ary tag fotsiny. Ity karazana fandalinana ity ihany dia ampiharina amin'ny atiny sy sary an-tsary, mba hiantohana ny fiarovana ny tranokala amin'ny ankapobeny.
Ohatra, ny fitaovana kendrena ifotony dia afaka mamakafaka horonan-tsary misy sary misy marika labiera, mamantatra amin'ny alàlan'ny audio & video fa tontolo azo antoka izy io, ary ampahafantaro ny mpivarotra fa fantsona optimum ho an'ny sy marketing momba ny labiera izy ity hiseho amin'ny mpihaino kendrena mifandraika amin'izany.
Ny fitaovana taloha kokoa dia mety tsy mamaka lohateny na audio fotsiny, fa tsy handinika lalina ny sary, izany hoe mety hiafara amin'ny tontolo tsy mendrika ny doka. Ohatra, ny lohatenin'ny horonantsary dia mety tsy mampidi-doza ary heverina ho toy izany azo antoka amin'ny alàlan'ny fitaovana maoderina iray, toa Ahoana ny fomba fanaovana labiera tsara na izany aza ny atin'ny horonantsary mihitsy dia mety tsy mety tokoa, toy ny lahatsarin'ireo tanora tsy ampy taona manao labiera - ankehitriny ny dokambarotra marika amin'io tontolo io dia zavatra tsy zakan'ny mpivarotra amin'izao fotoana izao.
Na izany aza ny vahaolana toa 4D dia nanangana tsenambarotra mifototra amin'ny indostria voalohany izay ahafahan'ny mpiaramiasa teknolojia voafantina miditra ao amin'ny algorithman'izy ireo ho toy ny lamina kendrena fanampiny, ary ny mpiara-miasa toa an'i Factmata dia manolotra fiarovana amin'ny marika amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra, tsy mendrika, na misy poizina ary azo ampiharina mba hiantohana ny fiarovana ny marika. ary ny fitoviana dia tantanana tsara.
Fantaro bebe kokoa momba ny fikendrena ny zava-misy ao amin'ny taratasinay fotsy farany:
Tanjona eo amin'ny tontolon-karena: miverina amin'ny ho avin'ny marketing
Momba an'i Silverbullet
Silverbullet dia karazany vaovao amin'ny serivisy marketing-data smart, natao hanomezana hery ny orinasa hahatratra amin'ny alalàn'ny serivisy data, ny atiny misy fampahalalana ary ny programa. Ny fifangaroan-tsainay amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny traikefan'olombelona dia manome fahalalana hampatanjaka ny fiovan'ny varotrao ho avy.
Tags: fiarovana ny marikaclickbaitireo dokambarotra ifanaovanatanjona ara-nofofizarazarana hyperpolitika politika hyperfianarana milinavolafotsymametraka ny